သင်သွားလိုရာ သွားနိုင်ပြီ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / သင်သွားလိုရာ သွားနိုင်ပြီ
Apann Pyay 3:03 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
(၁) ဒီနေ့တော့ ခွင့်ရလို့ပြန်လာပြီ အမေရေ သင်တန်းတက်မယ့်သူ တာဝန်နဲ့လာသူဆေးရုံပြောင်းသူ ခွင့်နဲ့ပြန်သူစသဖြင့်သားတို့သူငယ်ချင်းတစ်စုအတွက် ဝေဟင်ခရီးဟာပျော်စရာတစ်ခုပေါ့ အမေ ။
ဆယ်တန်းမှာ အမှတ်နည်းခဲ့တယ်DSA အတွက် ပေါင်ချိန်မပြည့်ခဲ့ဘူး Top Gunထဲက တွမ်ခရုကိုရူးခဲ့မိတယ် ဒီလိုနဲ့ သားလေတပ်ထဲဝင်တော့ အမေလည်း ကျေနပ်ခဲ့တယ်လေ ။
တကယ်တော့လည်း ဘဝရဲ့ အပြောင်းအလဲကို လိုချင်ခဲ့တာပါ လူငယ်ပီပီ တောမြို့လေးမှာပဲ တစ်သက်စာမြုပ်မနေလိုဘူး အားလုံးကိုမော်ကြည့်မနေလိုဘူးလေတပ်မှာတော့ ငုံ့ကြည့်ရလို့ ပျော်တာပေါ့ အမေရယ်။
ဒီနေ့တော့ ခွင့်ရလို့ပြန်ခဲ့ပြီ အမေရေလေယာဉ်မောင်းရတဲ့အခါပင်လယ်ပေါ်ရှပ်ပျံရတဲ့အရသာသစ်တောစိမ်းတွေပေါ် ဂျွမ်းထိုးရတဲ့အရသာတွေအမေ့ကို ပြောပြချင်စမ်းတယ်လေထီးခုန်တဲ့အခါတိုက်တာအိမ်ခြေတွေက အောက်မှာမြစ်တွေကွင်းပြင်တွေက တဖြည်းဖြည်း ပြေးဝင်လာတဲ့အရသာကိုစွဲမက်ရင်ခုန်မိတယ်
အမေ့သား ပိန်ညှက်ညှက်လေးမဟုတ်တော့ဘူး အမေလေတပ်ဝတ်စုံကြီးနဲ့ သံတိုင်လို တောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်ဟန်နဲ့လေဆိပ်မှာလာကြိုရင်အမေနဲ့ ညီမလေးမှတ်မိပါ့မလား။
လေတပ်ထဲ ဝင်ကာစကတော့စွန့်စားချင်တာပါပဲမိဘအရိပ်ကခွဲပြီး ကိုယ့်ခြေပေါ်ကိုယ်ရပ်ချင်တာပါပဲကြီးပွားတိုးတက်ချင်တာပါပဲလေတပ်သား ဖြစ်လာတော့လည်းဒါတွေထက် အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိလာရတယ်မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတလျှောက် မျှော်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတို့တိုင်းတို့ပြည် တို့ပင်လယ် တို့ဝေဟင်ပဲ
ငါတို့ဟာ ငါတို့ပိုင်နက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရသူတွေပဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်လာတယ်သားဂုဏ်ယူပါတယ်စိတ်သဘောထားကြီးမြင့်တဲ့ဆရာတွေရိုးသားဖော်ရွေတဲ့စစ်သည်မိသားစုတွေရယ်လေ့ကျင့်ခန်းများစွာနဲ့အတူပေါ့ကျွမ်းကျင်လေသူရဲဘဝကို သားမျှော်မှန်းတယ်အမေ. . .အမေရေ . .ရာသီဥတုမကောင်းဘူးထင်တယ်သားတို့လေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းသလား မသိဘူး
. . . . . . . . . . .။
(၂) ပျက်မကျခဲ့သော မေတ္တာတရားများ ပျက်မကျခဲ့သော စာနာမှုများ ပျက်မကျခဲ့သော သံယောဇဉ်များအတွက် ကျေးဇူးပါ တပ်မတော်အမိန့်ပြန်တမ်းမှာ "သင်သွားလိုရာ သွားနိုင်ပြီ". .တဲ့။
(၃) အခုတော့ ရာသီဥတုကောင်းတယ်ချစ်တဲ့ ပင်လယ်ဟာကြည်စိမ်းလို့ချစ်တဲ့ ကောင်းကင်ဟာပြာလွင်လို့
သားတစ်ကိုယ်လုံးလည်းလွတ်လပ်ပေါ့ပါးလို့ပါ အမေရယ် . .။
၈ ၆ ၁၇
(၁) ဒီနတေ့ော့ ခှငျ့ရလို့ပွနျလာပွီ အမရေေ သငျတနျးတကျမယျ့သူ တာဝနျနဲ့လာသူဆေးရုံပွောငျးသူ ခှငျ့နဲ့ပွနျသူစသဖွငျ့သားတို့သူငယျခငျြးတဈစုအတှကျ ဝဟေငျခရီးဟာပြျောစရာတဈခုပေါ့ အမေ ။
ဆယျတနျးမှာ အမှတျနညျးခဲ့တယျDSA အတှကျ ပေါငျခြိနျမပွညျ့ခဲ့ဘူး Top Gunထဲက တှမျခရုကိုရူးခဲ့မိတယျ ဒီလိုနဲ့ သားလတေပျထဲဝငျတော့ အမလေညျး ကနြေပျခဲ့တယျလေ ။
တကယျတော့လညျး ဘဝရဲ့ အပွောငျးအလဲကို လိုခငျြခဲ့တာပါ လူငယျပီပီ တောမွို့လေးမှာပဲ တဈသကျစာမွုပျမနလေိုဘူး အားလုံးကိုမျောကွညျ့မနလေိုဘူးလတေပျမှာတော့ ငုံ့ကွညျ့ရလို့ ပြျောတာပေါ့ အမရေယျ။
ဒီနတေ့ော့ ခှငျ့ရလို့ပွနျခဲ့ပွီ အမရေလေယောဉျမောငျးရတဲ့အခါပငျလယျပျေါရှပျပြံရတဲ့အရသာသဈတောစိမျးတှပေျေါ ဂြှမျးထိုးရတဲ့အရသာတှအေမကေို့ ပွောပွခငျြစမျးတယျလထေီးခုနျတဲ့အခါတိုကျတာအိမျခွတှေကေ အောကျမှာမွဈတှကှေငျးပွငျတှကေ တဖွညျးဖွညျး ပွေးဝငျလာတဲ့အရသာကိုစှဲမကျရငျခုနျမိတယျ
အမသေ့ား ပိနျညှကျညှကျလေးမဟုတျတော့ဘူး အမလေတေပျဝတျစုံကွီးနဲ့ သံတိုငျလို တောငျ့တငျးတဲ့ကိုယျဟနျနဲ့လဆေိပျမှာလာကွိုရငျအမနေဲ့ ညီမလေးမှတျမိပါ့မလား။
လတေပျထဲ ဝငျကာစကတော့စှနျ့စားခငျြတာပါပဲမိဘအရိပျကခှဲပွီး ကိုယျ့ခွပေျေါကိုယျရပျခငျြတာပါပဲကွီးပှားတိုးတကျခငျြတာပါပဲလတေပျသား ဖွဈလာတော့လညျးဒါတှထေကျ အရေးကွီးတဲ့အကွောငျးအရာတှကေိုသိလာရတယျမိုးကုတျစကျဝိုငျးတလြှောကျ မြှျောကွညျ့လိုကျရငျဒါတို့တိုငျးတို့ပွညျ တို့ပငျလယျ တို့ဝဟေငျပဲ
ငါတို့ဟာ ငါတို့ပိုငျနကျကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျရသူတှပေဲဆိုတဲ့ အတှေးမြိုးဝငျလာတယျသားဂုဏျယူပါတယျစိတျသဘောထားကွီးမွငျ့တဲ့ဆရာတှရေိုးသားဖျောရှတေဲ့စဈသညျမိသားစုတှရေယျလကေ့ငျြ့ခနျးမြားစှာနဲ့အတူပေါ့ကြှမျးကငျြလသေူရဲဘဝကို သားမြှျောမှနျးတယျအမေ. . .အမရေေ . .ရာသီဥတုမကောငျးဘူးထငျတယျသားတို့လယောဉျစကျခြို့ယှငျးသလား မသိဘူး
(၂) ပကျြမကခြဲ့သော မတ်ေတာတရားမြား ပကျြမကခြဲ့သော စာနာမှုမြား ပကျြမကခြဲ့သော သံယောဇဉျမြားအတှကျ ကြေးဇူးပါ တပျမတျောအမိနျ့ပွနျတမျးမှာ "သငျသှားလိုရာ သှားနိုငျပွီ". .တဲ့။
(၃) အခုတော့ ရာသီဥတုကောငျးတယျခဈြတဲ့ ပငျလယျဟာကွညျစိမျးလို့ခဈြတဲ့ ကောငျးကငျဟာပွာလှငျလို့
သားတဈကိုယျလုံးလညျးလှတျလပျပေါ့ပါးလို့ပါ အမရေယျ . .။